Xaafado ka mida Muqdisho oo ka baxay Gacanta Ciidamada taageersan Farmaajo iyo Xaaladaha ka dhalan kara.. - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Xaafado ka mida Muqdisho oo ka baxay Gacanta Ciidamada taageersan Farmaajo iyo Xaaladaha ka dhalan kara..
Xaaladda magaalada Muqdisho ayaa gashay jaha-wareer siyaasadeed oo mid amni u xuub siibanaya, kadib markii madaxweynaha xilkiisu dhammaaday u kororsaday muddo 2 sano ah, waxaana soo baxay aagag cusub oo ay degayaan saraakiil iyo madax hore.
Xaafadan ee degmada Hodon ayaa noqotay goob aanay ka talin ciidamada taageersan Maxamed C/llaahi Farmaajo markii uu saldhig ka dhigtay taliyihii Booliska Gobolka Banaadir Saadaq Cumar Xasan oo ciidamada dowladda ay laba jeer isku dayeen inay ku weerarraan Gurigii uu ka degayaa Muqdisho ee u dhow Garoonka Muqdisho.
Xaafadan qeyb ka mida ayaa la jaray wadooyinka, iyadoo carro-tuur lagu sameeyay, waxaana ku sugan ciidamo fara badan oo ku hubeysan gaadiidka dagaalka iyo hubka culus, halkaas oo hadda ah aag ka caagan ciidamada ka amar qaata Farmaajo, markii xalay xaalad adag iyo dagaal lagu sigtay, kadibna ay ka laabteen ciidamadii laga diray Villa Somalia.
C/CASIIS IYO KAARAAN
Xaafado ka mida degmooyinka isku dhegan ee C/casiis iyo Kaaraan waxaa sal dhigtay madaxweynihii hore ee Xasan Seekh, waxaana wehliya ciidamo taabasan, iyadoo uu dhinaca ku hayo Senator Muuse Suudi oo isna leh ciidamo taageera.
Aaggaas ka bilowda isgoysa Mirinaayada waxaa ku sugan ciidamo kale oo kuwa dowlada ah, balse ka amar qaata Xasan Sheekh iyo Muuse Suudi, waxaana lagu qasbaa gaadiidka dagaalka ciidamada Madaxtooyada inay dib uga laabtaan, iyadoo oo aanay geli karin ciidamada taabacsan Farmaajo.
Sidoo kale waxaa la filayaa in madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed uu dego mid ka mid degmooyinka Yaaqshiid, Kaaraan iyo C/casiis.
HODON IYO DEYNIILE
Musharixiintii hore ee Xasan Cali Kheyre iyo C/raxmaan C/shakuur ayaa sidoo kale isu diyaarinaya inay degaan xaafado kale oo ka mida degmooyinka Hodon iyo Deyniile, taasoo qeyb ka qorshe ay amnigooda u sugayaan markii doorashadii dalku geli lahaa la soo xiray.
Halista ka dhalan karta ciidamo iska horjeeda oo Muqdisho ku wada sugan iyo degaano ka baxa gacanta ciidamada taageersan Farmaajo ee weli huwan magaca dowladda waa mid muuqata, iyadoo rajada hartay ay tahay inuu Farmaajo ka laabto muddo kororsiga ama cadaadis uga yimaado dhinacyo kale.
Previous articleAxmed Madoobe oo xilalkii ka qaaday taliyeyaasha Booliska iyo Nabadsugidda Jubbaland
Next articleBaarlamaanka Puntland oo Go’aan Culus ka qaatay Muddo kororsiga Farmaajo iyo Cod loo qaaday